ကျဆုံးသွားတဲ့ မီးသတ်ရဲဘော်တွေကို ဂုဏ်ပြုပါတယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကျဆုံးသွားတဲ့ မီးသတ်ရဲဘော်တွေကို ဂုဏ်ပြုပါတယ်
ကျဆုံးသွားတဲ့ မီးသတ်ရဲဘော်တွေကို ဂုဏ်ပြုပါတယ်
Posted by rabbit on Dec 29, 2011 in Creative Writing, My Dear Diary | 23 comments
မနက် အာရုံတက် ၂နာရီလောက်မှာ စက်ဆန်းဘက်မှာ ပေါက်ကွဲမှု ပြင်းထန်စွာ ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ သတင်းရပါတယ် .. ဒိန်းခနဲ အသံကြီးနဲ့အတူ အိမ်တွေ သိမ့်သိမ့်တုန်သွားပြီး လူတွေ အားလုံး လန့်နိုးသွားရတဲ့အထိ ပြင်းထန်လွန်းခဲ့တာပါ။
အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပါပဲ … စက်ဆန်းဘက်ဆိုတာက စက်ရုံ သိုလှောင်ရုံတွေများတဲ့နေရာတစ်ခုပါ .. ရုံးလေးဘက်မှာလူနေအိမ်ခြေတွေကလဲ ခပ်စိတ်စိတ်ရှိပါတယ် …… ညကတော့ ဘုမသိဘမသိနဲ့ CNG ဆိုင်ပဲ ပေါက်ကွဲတာလိုလို … အတည်တကျ မရှိတဲ့ သတင်းတွေနဲ့ပေါ့ … မီးသတ်ကားတွေကလည်း တစ်စီးပြီး တစ်စီး ဥသြတွေဆွဲပြီး ဖြတ်သွားတာ ကြားရတာကလည်း ကြက်သီးထစရာပါ …
မနက်ရုံးရောက်တော့ အင်တာနက်က သတင်းတွေ ဖတ်ရတဲ့အထဲမှာ ဘယ်နှစ်ယောက် အသက်ဆုံးရှုံးပြီး ဘယ်နှစ်ယောက်ကတော့ ဒဏ်ရာ အပြင်းအထန်ရကြောင်း …. သေဆုံးသူတွေထဲမှာ အရပ်သားတွေအပြင် မီးသတ်ဝန်ထမ်းတွေပါ ပါသွားကြောင်း ဖတ်လိုက်ရပါတယ် ….
မီးသတ်ဝန်ထမ်းတွေဟာ တစ်ကယ့်ကို သနားစရာကောင်းလှပါတယ် ….. တစ်ကယ်တမ်း ဖြစ်လာပြီဆိုရင် အသက်နဲ့ရင်းပြီး သူတို့တာဝန်ကို ထမ်းကြရတာပါ …… အဲလို ကြိုးပမ်းတာကို ချီးကျူး ဂုဏ်ပြုပေးတဲ့သူ သိပ်မရှိပါဘူး …. မီးသတ်သမား မီးသတ်ရမှာ သူတို့တာဝန်ပဲဆိုတာ မှန်ပါတယ် ….. ဒါပေမဲ့ စဉ်းစားကြည့်ပါ .. တစ်ကယ်တမ်း မီးလောင်တဲ့နေရာတွေမှာ ပိတ်မိနေတဲ့သူတွေကို အန္တရာယ်ကြားထဲက ကြိုးစားကယ်တင်တာ မီးသတ်ဝန်ထမ်းတွေပါ …. ရန်သူမျိုး ငါးပါး တစ်ပါးအပါဖြစ်တဲ့ မီးဘေး ကြီး တစ်ကယ်တမ်း ကြုံလာရရင် အရမ်းကြောက်ဖို့ ကောင်းတယ်ဆိုတာ ကိုယ်တိုင် မကြုံဖူးလဲ သိကြမှာပါ …. တော်တော်များများက ပြောကြတယ် …. မီးသတ်ကားက လမ်းထဲတောင် မဝင်ဘူး … ရေမပါဘူး ..ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့ …. တစ်ချို့လမ်းတွေဟာ မီးသတ်ကား ဝင်လို့မရအောင် ကျဉ်းပါတယ် … ဒါပေမဲ့ လူတွေက လမ်းကျဉ်းတာကို မမြင်ဘူး .. ကားမဝင်တာကိုပဲ မြင်တယ် ….. ပြီးတော့ မီးသတ်ကားထဲ ဆန့်တဲ့ရေ ပမာဏက တစ်ကယ်တမ်း ဖြန်းရပြီဆိုရင် မိနစ်ပိုင်းလောက်ပဲ သုံးလို့ရတာပါ … အဲဒီအကြောင်းတွေ တော်တော်များများက မသိကြပါဘူး …. မှန်ပါတယ် .. လူတွေပြောတဲ့အချို့အချက်တွေ မှန်တာလဲ ရှိမှာပါ …. ဒါပေမဲ့ တစ်ကယ်တမ်း အသက်စွန့်ပြီး ကယ်ရပြီ ထိခိုက်ပြီဆိုရင် မီးသတ်ဝန်ထမ်းတွေ ထိပ်ဆုံးက ပါပါတယ်။
မနေ့ကလို အဖြစ်အပျက်မျိုးမှာဆိုရင် အင်တာနက်သတင်းတွေအရ မီးသတ်သမား တွေ အသက် ဆုံးရှုံးသွားရတာ တွေ့ပါတယ် … သူတို့ မိသားစုအတွက် မဟုတ်ပဲ ပြည်သူတွေ ဆက်ပြီး ဒုက္ခမများစေဖို့ ပြည်သူတွေရဲ့ အိမ်တွေ ဆက်ပြီး မထိခိုက်စေဖို့ သူတို့ ကိုယ်ကျိုးကို စွန့်ပြီး တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်းနဲ့ အသက်ပေးသွားကြတာပါ … ဘယ်လောက်များ သနားဖို့ ကောင်းပါသလဲ …. သူတို့ဟာ စနစ် တကျ လေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်း ခံထားရတဲ့ ရဲဘော်တွေပါ …. ဒီလိုအရှိန်ကောင်းနေတဲ့ မီး၊ အထူးသဖြင့် သိုလှောင်ရုံတွေ စက်ရုံတွေ ကို လောင်နေတဲ့မီးဟာ အချိန်မရွေး ထပြီး ပေါက်ကွဲနိုင်တယ်၊ အန္တရာယ်များတယ်ဆိုတာ သူတို့ မသိဘဲနေမှာ မဟုတ်ပါဘူး …သိရဲ့နဲ့ ဒီလောင်နေတဲ့မီး အရှိန်ကို အမြန်ဆုံး လျှော့ချပေးနိုင်အောင် သူတို့ ကြိုးစားကြတာပါ … သူတို့ အသက်ကို ပဓာနမထားပဲနဲ့ပေါ့ ….
ဒီမနက်မှာ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားရတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို ကြည့် သတင်းတွေကို ဖတ်ပြီး ကျွန်မ ဒီစာရေးဖြစ်တာပါ … သေဆုံးသွားသူတွေအတွက်လဲ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသလို အသက်ပေးသွားတဲ့ မီးသတ်ရဲဘော်တွေအတွက်လဲ ဝမ်းနည်းမိပါတယ် …. ဒီစာလေးနဲ့ ကျဆုံးသွားတဲ့ မီးသတ်ရဲဘော်တွေကို ဂုဏ်ပြုပါတယ်… နောက်ဆို လူတွေလဲ မီးသတ်ရဲဘော်တွေ ဘက်ကို စာနာနားလည်ပေးနိုင်ကြဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ် ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Rabbit Rabbit has written4post in this Website..
simple & ever think positively
ပြည်သူတွေအတွက် အသက်စွန့်ကူညီခဲ့ကြတဲ့ မီးသတ်ရဲဘော်များကို
ရဲဘော်များရဲ့ ကျန်ရစ်သူ မိသားစုများကိုလဲ သက်ဆိုင်ရာမှ ထိုက်ထိုက်တန်တန် ဂုဏ်ပြုကူညီနိုင်ပါစေဗျား
လက်ရှိဒုက္ခရောက်နေတဲ့ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ပြည်သူတွေကိုလဲ အဖွဲ့ အစည်းအမျိုးမျိုးမှ လျင်မြန်စွာ သွားရောက်
ကျွန်တော်လဲ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ဂုဏ်ပြုပါတယ်… ဒီလောက် စားဝတ်နေရေး အတွက် ဘာမှမရပဲ စေတနာရှေ.ထားပြီး မီးသတ်အလုပ်လုပ်ပေးနေတဲအပြင် အခုလိုအခြေအနေမှာ အသက်တောင်စွန်.သွားရှာကြတော့ ပြောမပြတတ်အောင် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်ဗျာ……
ဘာပဲပြောပြော သူတို.တွေမိသားစုတွေ အဆင်ပြေအောင် ကူညီပေးစေခြင်တယ်ဗျာ……
မှန်ပါတယ်။ ပြည်သူ့အတွက်အသက်ကိုပဓါနမထားပဲ စွမ်းစွမ်းတမံဆောင်ရွက်တာ မီးသတ်ရဲဘော်တွေပါ။ ခံစားခွင့်၊ လစာဆိုတာလဲမိသားစုတစုလုံးကိုကိုယ်စားမပြုနိုင်တဲ့ပမာနပါ။ ဒါတောင်ဖြစ်လာပြီဟေ့ဆိုရှေ့ဆုံး ကအစွမ်းကုန်ကြိုးစားကြတာပါ။ ဒါကိုလဲအကောင်းမြင်မပေးကြပဲအပြစ်မြင်တဲ့သူကများပါတယ်။ နိုင်ငံတော် ရဲ့မီးသတ် ရဲဘော်တွေကိုပံ့ပိုးမှု့ကလဲမဖြစ်စလောက်ပါ။ ရှိတာနဲ့စူဖါပြီးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြံဖန်ပြီး လုပ်နေကြရတာပါ။ အင်မတန်ကောင်းတဲ့ဆောင်းပါလေးပါ။ ကျဆုံးသွားတဲ့မီးသတ်ရဲဘော်တွေ နဲ့သူ့မိသား စုတွေလဲဂုဏ်ယူစရာဖြစ်မှာပါ။ ကျန်နေတဲ့မီးသတ်ရဲဘော်တွေလဲ အားတက်စရာပါ။ rabbit နဲ့အတူကျွန်မ တို့လဲဂုဏ်ယူပါတယ်။ ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ထားပြီးကျဆုံးသွားတာမို့ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေလို့ဆုတောင်း ပေးလိုက်ပါတယ်။
အများအကြိုးဆောင်ရွက်ရင်းနဲ့ သေဆုံးသွားတာ စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ ဒါပေမဲ့ ဂုဏ်ရှိစွာနဲ့ သေဆုံးခြင်းကို လေးစားဂုဏ်ယူလျှက်ပါ၊ကောင်းရာသုဂတိ လားပါစေ။
အလွန်ကို စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။ အန္ဒရာယ်ကို ရှောင်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားဟာ သူတို့အတွက်မဟုတ်ပဲ။ သူတို့ကတော့ အန္ဒရာယ်ဆီကိုတန်းတန်းကြီး သွားရတဲ့သူတွေပါ။ အရမ်းမွန်မြတ်တဲ့ အလုပ်ပါ။ ကျဆုံးသွားတဲ့မီးသတ်ရဲဘော်တွေ ကိုခန်းခန်းနားနား ဂုဏ်ပြုပေးစေချင်ပါတယ်။ ကာင်းရာသုဂတိလား ကြပါစေ။
မနက်အိပ်ရာထထခြင်း ဒီသတင်း ဖတ်ရတာ စိတ်မကောင်းဘူး။ သူတို့ကို မှီခိုပြီးနေတဲ့ မိသားစုတွေရဲ့ ဘ၀တွေ အတွက်လည်း ရင်လေးစရာပါပဲ။ တကယ်ကို စာနာစိတ်ဝင်မိတာပါ။ တကယ်လည်း စိတ်ထဲမှာ မကောင်းဘူး သနားလွန်းလို့။
တိုင်းပြည်အတွက် တာဝန်တစ်ခုကို ကျေပွန်အောင် ထမ်းဆောင်ရင်း ကျဆုံးသွားခဲ့တဲ့ မီးသတ်သမားတွေကို ကျွန်တော်လည်း ဒီနေရာကနေ ဂုဏ်ပြုပါတယ်။ သူတို့အတွက် စိတ်မကောင်းလည်း ဖြစ်မိပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ မိသားစုကိုလည်း နိုင်ငံတော် အစိုးရ အနေနဲ့ ဝတ်ကျေ တမ်းကျေ သဘောမျိုး မပြုလောက်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်ရဲ့ တာဝန်ကို အသက်နဲ့ ပေးဆပ်သွားသူတွေအတွက် နိုင်ငံတော် အနေနဲ့လည်း ပြန်ပြီး ထိုက်ထိုက်တန်တန် ဂုဏ်ပြုသင့်ပါတယ်။
တာဝန်တွေကို ထမ်းဆောင်ရင်း ကျဆုံးသွားတဲ့မီးသတ်ရဲဘော်တွေကို ဂုဏ်ပြုပါတယ်
စိတ်ထဲမှာလည်း တကယ်မကောင်းပါဘူး။ ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ် ….
—— သူတို့ မိသားစုအတွက် မဟုတ်ပဲ ပြည်သူတွေ ဆက်ပြီး ဒုက္ခမများစေဖို့ ပြည်သူတွေရဲ့ အိမ်တွေ ဆက်ပြီး မထိခိုက်စေဖို့ သူတို့ ကိုယ်ကျိုးကို စွန့်ပြီး တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်းနဲ့ အသက်ပေးသွားကြတာပါ …—-
အဲဒါတကယ်မှန်ပါတယ်။ သူတို့ဟာလဲ တကဲ့ သူရဲကောင်းတွေပါဘဲ။
သူတို့မိသားစုတွေအတွက် လဲ ရသင့်တဲ့ လျော်ကြေးငွေ များ ထိုက်ထိုက်တန်တန် ရစေဖို့ ဆုတောင်း ပါတယ်။ ဝိုင်းကူညီမဲ့ သူများရှိကြမှာပါ။
ကျဆုံးသွားတဲ့မီးသတ်ရဲဘော်များကို စိတ်မကောင်းခြင်းများစွာနဲ့ ဒိနေရာလေးကနေ ဂုဏ်ပြု လိုက်ပါတယ်
ပါဝင်ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့ မီးသတ်ရဲဘော်အားလုံးကိုလဲ လေးစားပါ၏
တကယ်တော့ မီးသတ်ရဲဘော်တွေဆိုတာ အများအတွက် ကိုယ်ကြိုးစွန့်ထားကြသူတွေဖြစ်လို့
မိမိ အသက်ကို ပဓါန မထားဘဲ အများရဲ့ အသက်ကို ရဲ ရဲ ၀ံ့ ဝံ့ ကယ်တင်ကာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ ၇င်း သေဆုံး ခဲ့ ကြ၇သော မီးသတ်ရဲဘော်များကို ဂုဏ်ပြု ပါတယ်။
ယခုဘဲ မေးထဲ ကနေ တဆင့် ၇ခဲ့ ၇တဲ့ သတင်းပါ။
6:45 PM (Update)
မီးလောင်ကျွမ်းမှုတွင် မီးငြိမ်းသတ်ရင်း သေဆုံးခဲ့ရသော မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင် (၅) ဦးအား ဒီဇင်ဘာ ၂၉ ရက် ညနေ ၅ နာရီ ၁၀ မိနစ်တွင် တပ်ဖွဲ့ဝင်အခမ်းအနားဖြင့် မီးသဂြိုလ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ မီးလောင်ကျွမ်းမှုနှင့် ပေါက်ကွဲမှုအတွင်း သေဆုံးသွားခဲ့သော တပ်ဖွဲ့ဝင် (၅) ဦးမှာ –
၁၊ တပ်ကြပ်ကြီး ဇော်ဌေး (၅၀)နှစ်
၂၊ တပ်ကြပ် တင်စိုး (၃၄) နှစ်
၃၊ တပ်သား မျိုးကျော်ကျော် (၂၀) နှစ်
၄၊ တပ်သား အောင်အောင် (၂၈) နှစ်
၅၊ တပ်သား သော်ဇင်မျိုးထက် (၂၁) နှစ် တို့ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အများအတွက် အသက်စွန့်သွားတဲ့ လူတွေ ကို လှိုက်လှိုက် လှဲလှဲ ဂုဏ်ပြုပါတယ်…..
တပ်သား မျိုးကျော်ကျော် ဆိုတဲ့ ကလေး က ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း တယောက်နဲ့ ရင်းနှီးပါတယ်..
စိတ်ဓါတ်ကောင်းမွန် တဲ့ ကလေးတယောက်ပါ..
အားလုံးကောင်းရာမွန်ရာ ရောက်ကြပါစေ ဗျာ..
အသက်ဆုံးရတဲ့ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်မိသားစုတွေ၊ဒဏ်ရာရတဲ့မီးသတ်တွေ၊ကြိုးစားငြိမ်းသတ်တဲ့ မီးသတ်တွေအားလုံးကို လေးစားပါတယ်။
သူတို့လက်ထဲ ထိထိရောက်ရောက် အားပေးဂုဏ်ပြုငွေပေးပေးမယ့် contacts တွေရှိရင်တင်ပေးစေချင်ပါတယ်။
မီးသတ်သမားကို.. အင်္ဂလိပ်လို ..Firefighter တဲ့..။
စစ်သားက..သေနတ်ကိုင်ပြီး..ရန်သူနဲ့တိုက်တယ်..။ တခါတလေ..ရန်သူက..ကိုယ့်ထက်..လက်နက်အင်အား..နည်းတာရှိတာပေါ့..။ ကျည်ရှောင်..ကွယ်ရာနေရာ နေလို့လည်း ရသေး..။
ရဲဆိုလည်း.. လူဆိုးတွေနဲ့..ချရာမှာ .. ကိုယ့်ဖက်က သာတာများတယ်..။ ကိုယ့်အုပ်စုက..စံနစ်တကျ ဂိုဏ်းဖွဲ့ထားတဲ့.. တရားဥပဒေအတွင်းကကိုး…။
ဆိုတော့..Firefighter က.. မီးနဲ့ကစားရတာပါ..။
သာမန်အားဖြင့်..မီးဆိုတာ.. လူထက်အင်အားသာပြီး.. ဖျက်ဆီးတတ်တာ သိသိကြီးနဲ့.. ရင်ဆိုင်ရသပေါ့…။
ဘ၀ကို ရင်းလုပ်ရတဲ့.. အလုပ်လေ…။
ကိုယ့်အလုပ်နဲ့သာ တိုက်ရိုက်ပတ်သက်တာဖြစ်ပြီး.. ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနဲ့ ဘာမှမဆိုင်တဲ့.. ကိုယ့်ထက်သာတဲ့မီးကို.. ကိုယ့်အသက်ရင်းပြီး.. ငြိမ်းသတ်ရတဲ့အလုပ်ပေါ့..။
အက်စစ်ထဲ..ရေပက်မိလို့..ထပေါက်ပေါက်..။ ယမ်းစိမ်းတွေပေါ်မီးစကျလို့.. ထပေါက်ပေါက်.. မီးသတ်ရင်းအသက်ဆုံးတဲ့.. မီးသတ်သမားတွေကို.. သူရဲကောင်းတွေလို့ သတ်မှတ်ပေးရတာ.. မင်္ဂလာတပါးပါပဲ..။
အဲဒီလိုသတ်မှတ်ပေးမှပဲ.. မီးသတ်အလုပ်ကို.. နောက်လူတွေ.. မျိုးဆက်ကမ်းနိုင်..လက်ဆင့်ကမ်းနိုင်တော့မှာပါ..။
မီးသတ်ဌာန.. ခေတ်မှီပြီး မီးသတ်သမားတွေ… လစာတွေကောင်းအောင်… ဒီခေတ်မှာ… ဦးစားပေးလုပ်သင့်လှတယ်ထင်ပါကြောင်း…။
မီးသတ်သမားတွေဆိုတာ အန္တရာယ်ကျရောက်ပြီဆိုတဲ့အချိန် အန္တရာယ်ကျရောက်ရာနေရာကို ကိုယ့်မိသားစု ဆွေမျိူးသားချင်းတွေအတွက် မဟုတ်ပဲ အရောက်သွားပြီး ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရတဲ့ မွန်မြတ်စိတ်ထားရှိသူများလို့ ပြောရမယ်ထင်ပါတယ်။
ခုဖြစ်ရပ်ကြောင့် အရင်က မီးသတ်သမားတွေနဲ့ လူထုကြားက မကောင်းတဲ့ အမြင်တွေကို ပြေပျောက်သွားစေနိုင်လျှင် ၀မ်းမြောက်ဖွယ်ရာပါပဲ။
ပြည်သူအတွက် အသက်ပေးသွားသူ အာဇာနည် မီးသတ်ရဲဘော် ငါးဦးအား ဤနေရာမှနေ၍ အလေးပြုလိုက်ပါသည် …။
အာဇာနည် ငါးဦးကို အခမ်းအနားနဲ့ သဂြိုလ်တဲ့ပုံပါ..
မီးသတ်ဌာန အလံတော့ လွှမ်းထားပါတယ် ..
ကျွန်တော့သဘောနဲ့ဆိုရင် နိုင်ငံတော် အလံတောင် လွှမ်းစေချင်တယ် ..
အီလဲဗင်းမီဒီယာက ကျဆုံးတဲ့သူတွေရဲ့ မိသားစုကို သိန်းနှစ်ဆယ်လှူသွားပါတယ်တဲ့
မိမိရဲ့ ကိုယ်ကျိုးစီးပွား ဖြစ်ထွန်းရေးမပါ .. လူတန်းစားခွဲခြားမှု မပါ ….. စွန့်လွှတ်မှုများစွာနဲ့ …. မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓါတ်အရင်းခံပြီး အသက်ပေးခဲ့တဲ့ မီးသတ်ရဲဘော်များကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲကျေးဇူးတင် ဂုဏ်ပြုလိုက်ပါတယ် ။ ကောင်းရာ သုဂတိလား ကြပါစေ
မနက်စောစော ဖေ့စ်ဘုတ်ခ်ဖွင့်တော့ မြင်ရတဲ့ ဈာပန အခမ်းနားက တကယ့်ကို စိတ်ထိခိုက်စေပါတယ် … ။အများအတွက် အသက်စွန့်သွားသူတွေ …. ကိုယ်နဲ့ သွေးမတော် ၊ သား မစပ်ပေမယ့် … မြင်ရတဲ့ဓါတ်ပုံတွေကြောင့် ကြက်သီးမွှေးညှင်းထလောက်အောင် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ် … ။
ကျန်ရစ်သူ မိသားစုရဲ့ ကြေကွဲဝမ်းနည်းမှုကို စာနာနားလည်မိရင်း … နိုင်ငံတော်က ဘယ်လိုဂုဏ်ပြုမလဲလို့ သိချင်စိတ်ဖြစ်မိပါတယ် …. ။
ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် သေဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့ ပြည်သူတွေအတွက်လည်း ကောင်းရာသုဂတိလားကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်
ဒီအဖြစ်အပျက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး သေဆုံးသွားတဲ့ မီးသတ်ရဲဘော်တွေနဲ့တူတူ
အသုံးချတတ်ရင် မီးသတ်သမားများရဲ့ အသက်စွန့်မှုကနေ မီးသတ်ဌာနပုံရိပ်ကို အများကြီး မြှင့်တင်သွားနိုင်တယ်။ လက်တွေ့အပိုင်းတော့ ပါရမှာပေါ့လေ၊ သို့သော် ယခုလို အများပြည်သူရဲ့ စာနာထောက်ခံမှုမျိုးဆိုတာ လုပ်ယူလို့ မရကောင်းဘူး။ အခြေအနေကြုံကြိုက်မှ ဖြစ်လာတတ်တာမျိုး။ ပြောသာပြောရတာပါ၊ ကြံ့ဖွတ်လို၊ အစိုးရလို အဖွဲ့မျိုးတွေက အချောင်ဝင်နှိုက်ဖို့ ပြင်နေလောက်ပြီ။ ဒါနဲ့ပဲ မလောက်မငှနဲ့ ဘဂျီးနွားကျောင်းပြီး လူအဆဲခံရအုံးမှာပဲ။
မီးသတ်အဖွဲ့ ဝင်တွေကော ကျန်ရစ်သူမိသားစုတွေပါ
လှူသမျှပေးသမျှ ထိုက်ထိုက်တန်တန်ရကြပါစေ ……